Greyish Dregs - Gobi - Wattpad
530K Reads 52.8K Votes 37 Part Story
By GobiTaoris Ongoing - Updated May 16, 2017
ကျနော်က သူ့အတွက် အရောင်ဝါးဝါးအနည် တစ်ခုပါ...Baekhyun
Kimhunny Nov 14, 2017
သနားပါတယ် Baek ရာ ငို ရပြီ ဟာာာာ
Liam_Rin Feb 11
တတိယတစ်ခေါက်ပြန်လာဖတ်တာတောင် ဝမ်းနည်းရတုန်း ပဲ T_T
lovelyinnie88 Sep 14, 2016
Sharr7 Jan 10, 2016
မုန်းတယ်​​အေ ငါ့ hyunnie​လေး သနားပါထယ်​
Dika_hs Jan 10, 2016
အစပဲရှိသေး မျက်ရည်ဝဲနေရပြီ ဒီကစိတ်နုပါတယ်ဆိုမှ..😢
Naw-HL Jan 04, 2016
ဝမ်းနည်းလိုက်​တာ puppy baek ရဲ့ ဘဝ​လေးကို သနားလို့ 😢😢
Get notified when Greyish Dregs is updated
Chan ♡ Baek : Jokes & Romances
220K 31K 473
For all ChanBaek HC...
Let's Laugh, Happy ,and love with CHANBAEK
223K 20.7K 1K
106K 8.9K 286
Sehun, Mr. perfect, isadoctor from Seoul hospital and Luhan isapity , helpless "blind" patient.If there werealove story between them, with different standards of lives, will there beahappy ending ?
Supporting Casts : Baek Hyun ( Girl Ver ), Tao (Girl Ver)
Type : Boys Love, Fanfiction
Author : Hundeer_sumyat ( Su Myat Thant )
Love Started (HunHan) [Yaoi]
143K 12K 396
13.3K 2.9K 180
Official_ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာ အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု
ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အရေးမကြီးဘူးထင်တာပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှားသွားတယ် တကယ်ချစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒါငါ့ရဲ့ official ချစ်သူလို့ သူသတ်မှတ်ပေးတာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အခမ်းနားဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ.......
သူကရောကျွန်တော့်ကို official လို့သတ်မှတ်ပါ့မလား.....
197K 20.3K 516
BaekHyun -​ ပျော်​​ပျော်​​နေတတ်​ပြီး လူချစ်​လူခင်ပေါတဲ့ ချစ်စရာ​ကောင်​​လေး ၁​ယောက်​..  မာနကြီးပြီး homo ကိုမုန်းတဲ့​ကောင်​​လေး ၁​ယောက်​ကို အမြင်​ကပ်​ကာ သူမကြိုက်​တာ​တွေပဲ လိုက်​ပြီး အရွဲ့တိုက်​ရာမှ အရမ်းချစ်မိသွားသူ..
ChanYeol - စာ​တော်​တယ်​.. အ​နေ​အေးတယ်​.. မာန​လေးမဆိုစ​လောက်​ကြီး​ပေမဲ့ သ​ဘော​တော့ ​ကောင်းပါတယ်​.. homo ​တွေကို လက်​မခံသလို ..မိန်းက​လေး​တွေနဲ့လည်း အ​ပေါင်းအသင်းမလုပ်​..တသက်​လုံးဒီလိုပုံစံနဲ့​နေလာတဲ့ သူ့ဘဝထဲကို စိတ်ရှုပ်​စရာ​တွေ အမြဲသယ်​လာ​ပေးတဲ့ ​ကောင်​​လေး ၁​ယောက်​ ဘယ်​လိုပုံစံနဲ့ဝင်​လာမလဲ ဆိုတာက​တော့....
5.1K 537 15
for my lovely pollen's birthday..
ပထမဆုံးပါ...တကယ်​ပထမဆုံး ​မွေး​နေ့လက်​​ဆောင်​အဖြစ်​ fic​ရေး​ပေးဖူးတာပါ..
ဒီ​နေ့​လေးက နှစ်​တနှစ်​ရဲ့ ​နောက်​ဆုံးရက်​လည်းဖြစ်​သလို အချစ်​ရဆုံး​သော chanbaek coupleရဲ့ bed memory anni​နေ့​လေးလည်း ဖြစ်​တယ်​​နော်​.
​မွေး​နေ့ရှင်​​လေး​ရော..ဖတ်​​ပေးကြတဲ့ ကိုယ်​​တွေရဲ့ bestie​လေး​တွေ​ရော ဒီ​ကောင်​​လေးကို သ​ဘောကျနှစ်​ခြိုက်​​ပေးကြမယ်​လို့ ဆု​တောင်းလိုက်​ပါတယ်​...
happy birthdayပါ ၀တ်​မှုံ​လေး...ကျ​နော့်​ကို ​ဆေး​တော့မထိုးပါနဲ့​နော်​..nurseမမ..ဆရာဝန်​​ချော​ချော​လေးနဲ့ ညားပါ​စေ..ヅ ヅ
166K 16.7K 482
သဘာဝမကျသော အချစ်ဟာ အပြစ်တစ်ခုဖြစ်မည်ဆိုရင် ထိုအပြစ်ကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံပါရစေ..။ ကျွန်တော်တို့ အချစ်ဟာ အဆုံးမရှိတာမို့။
236K 18.4K 686
I love you Arjushii.♡
BaekHyunee Loves Mr.Park!
This isacute & funny love story betweenapuppy-like cute boy Byun BaekHyun & dignified / smart gentleman Park ChanYeol!
84.3K 7.5K 67
# written by Suyeeluhan
# Chanbaek Yaoi